सफल टेक्नोलोजी महोत्सवको लागि तपाईंको चेकलिस्ट! | Martech Zone
मङ्गलबार, अप्रिल 29, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो अन्तिम साताको अन्त्यमा, हामीले पहिलो लात हाले संगीत, मार्केटिंग र टेक मिडवेस्ट घटना (#MTMW) - यहाँ इण्डियानापोलिसमा ल्युकेमिया र लिम्फोमा सोसाइटीको लागि मेरा बुबाको सम्झनामा पैसा कमाउने एउटा कार्यक्रम हो जुन हामी गत वर्ष हरायौं। यो पहिलो घटना हो जुन मैले कहिल्यै राखेको छु त्यसैले यो एकदम डरलाग्दो थियो। यद्यपि यो कुनै हिचकिचाहट बिना नै गयो र म अरूलाई अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न चाहन्छु किन यो यत्तिको सफल भयो।
हामीले एउटा गर्ने निर्णय गर्यौं प्रविधि महोत्सव औसत भन्दा बोरिंग कन्फरेन्स ताकि मान्छेहरु खोलिन्छन् र एक अर्कामा सामाजिक बन्नेछन् बरु अर्को खराब पावरपोइन्टले आँसु झुम्काउनु भन्दा। सहभागीहरू अझै एक पटक प्रायोजकहरूसँग एकै पटक तिनीहरूको प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गर्न सक्थे ... तर भाषण बिना।
दान - तपाइँको घटनाको पर्वाह नगरी, तपाइँले कार्यक्रमबाट केहि आयहरू निश्चित परोपकारमा जान निश्चित गरेर राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मामलामा हामीले १००% आम्दानी ल्युकेमिया र लिम्फोमा समाजलाई दान गर्‍यौं। हामीसँग पनि सहभागीहरूले उनीहरूसँगै पैसा संकलन गर्ने पहलहरू सुरु गरेका थिए जुन हामीसँगै मिलेर आएका थिए! धन्यबाद # run4doug
प्रायोजकहरू - एक चैरिटी भएकोले हामीलाई बाहिर गए र साइनेज, गिफ्ट कार्डहरू, स्टाफ, खाना, र संगीतको लागि प्रायोजकहरू फेला पार्न सक्षम पार्यो। हामीले उनीहरूसँग ट्रेडिंग प्रयास गरेर कम लागतमा प्याकेजहरू कसरी राख्न सक्छौं भनेर प्रायोजकहरूसँग काम गर्यौं - र यसले काम गर्यो!
स्थल - सहि स्थल महत्वपूर्ण छ। हामीले रथस्केलर इन्डियानापोलिसमा - जहाँसुकैबाट पहुँचको साथ शहरको चल्ती वर्गको उत्कृष्ट केन्द्र - यससँग बियर गार्डेन, एउटा बार र बल कोठा थियो - सबै संगीतहरू चलाउनका लागि चरणहरू र ध्वनिसहित। कर्मचारीहरू यसलाई सफल बनाउनका लागि थिए र सबै अपेक्षाहरू पार गरे।
सार्वजनिक सम्बन्ध - डिट्टो पीआरकार्यक्रमको प्रचार गर्नको लागि स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो, अखबार र अनलाइन मिडिया आउटलेटहरूसँग सम्पर्क गर्न महिनौं अथक प्रयास गरे। कार्यक्रम उनीहरूको प्रयासको लागि एक ठूलो सफलता थियो!
सामाजिक संजाल - हामीले लगभग हरेक दिन हाम्रो साइटमा र सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा पोष्ट गर्नुभयो मानिसहरूलाई आउन लोभ्याउन जारी राख्न। हामी अधिक जागरूकता ड्राइभ गर्न फेसबुक र ट्विटरमा विज्ञापन पनि दियौं। हामी संग काम साइट रणनीति, स्थानीय खोज विशेषज्ञहरू जसले घटनालाई सामाजिक र हाम्रोमा प्रमोट गरे मार्केटि radio रेडियो कार्यक्रम.
संगीत - संगीत को एक विविध श्रेणी ... ब्लूग्स देखि ब्लूग्रास र फोक को जाज उपस्थित थियो। हामी यहाँबाट हाम्रो टेक्नोलोजी हलमा एक उच्च परिभाषा भर्चुअल कन्सर्ट पनि चलायौं वातावरण.
घटना व्यवस्थापन - स्टीव जेरार्डी एक स्थानीय घटना प्रवर्तक हो र सबै कुरा जान्दछ जुन योजनाको आवश्यक छ र प्रत्येक विवरणमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। उहाँ घटनाको योजना र कार्यान्वयन भर अद्भुत भन्दा कम हुनुहुन्न।
अनलाइन पञ्जीकरण - सहभागीहरूले अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्थे र हामीसँग गेटमा एक आगन्तुक सूची थियो, उनीहरूको आईप्याडसँग जहाँ उनीहरू क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्न सक्थे। टिकटको सट्टा, हामी वितरित रंग कोडित नाडी ब्यान्ड जहाँ प्रायोजकहरू, वयस्कहरू, बच्चाहरू र ब्यान्डहरू सबैको सजीलो पहिचानको लागि आफ्नै रंग थियो।
चिन्ह - हामीलाई फोटो, ब्यानर र उडानकर्ताहरूको लागि प्रोमोशनल आईटमहरू, नक्सा, रातो कार्पेट पृष्ठभूमि चाहिएको थियो र एउटा अविश्वसनीय कम्पनीसँग साझेदारी गरिएको छ। PERQ ती गर्नका लागि।
पुरस्कार - PERQ कार्यक्रम उनीहरूको FATWIN किओस्कहरू कार्यक्रममा जहाँ सबै सहभागीले रेजिस्टर गर्न र पुरस्कार जित्न सक्थे। यसले हाम्रो टेक्नोलोजी हलमा पैदल यातायात बढायो र हाम्रा सहभागीहरू सबै इनाम लिएर घर फर्किए!
आवाज - म आवाज कत्तिको महत्त्वपूर्ण थियो भनेर म तान्न सक्दिन। संगीत र व्यक्तिहरूको सही सन्तुलनको साथ, सबैले कार्यक्रममा विस्फोट गरिरहेको थिए यो एकदम चर्को छैन। व्यक्तिहरू कुराकानी गर्न सक्षम थिए र अझै पनि पृष्ठभूमिमा खेलिरहेको आश्चर्यजनक प्रतिभा सुन्न सक्छ। टेक्नोलोजी हल एक पायदानमा तल थियो ताकि प्रायोजकहरूले बढी ध्यान पाउन सकून्। पिरामिड साउन्ड वर्क्सको नेतृत्वमा माइक ओट्टिन्गर ध्वनि नेतृत्व र यो आश्चर्यजनक थियो!
टी-शर्ट - कला प्रेस उत्सव को लागी एक स्मारक टी-शर्ट डिजाइन गरीएको छ (तर तपाईले उनलाई यहाँ मे १० सम्म अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ)। स्टाफको पछाडि STAFF छापिएको टि-शर्ट थियो। आर्ट प्रेसले व्यापारिक तालिका पनि सेट अप गर्‍यो जुन क्रेडिट कार्ड स्वीकार्यो र अनलाइन अर्डरिंग साइट पनि निर्माण गर्‍यो ताकि भविष्यमा शर्ट किन्न सकिए!
खाद्य र पेय - आश्चर्यजनक जर्मन मेनूको भिन्नता गर्न, हामी पनि एक आश्चर्यजनक सूचीबद्ध स्थानीय न्यू योर्क पिज्जरिया घटनाको ढोकामा उनीहरूको खाना ट्रक पार्क गर्न। दुबै स्थलहरूले भने कि तिनीहरूले शानदार बिक्री गर्नुभयो ... र भीड भोकाएको थियो! जहाँ घटनास्थलको एक हिस्सा एक बार थियो, हामीसँग बल कोठा पनि उपलब्ध थियो यदि मान्छेहरू पिउने वरिपरि सहज थिएनन्।
स्टेशनहरु चार्ज गर्दै - सबैजनासँग फोन छ र तिनीहरू सबैलाई चार्ज गर्न आवश्यक पर्दछ। धन्यबाद हाम्रो लागि, Powerqube तिनीहरूको आश्चर्यजनक स्मार्ट चार्जरहरूको एक प्यालेट वितरित गरियो र सबैजनाले फोटोहरू लिन र दिनभर साझेदारी गर्न सक्षम थिए! मृत ब्याट्रीको मतलब सेयरिंग छैन !!!
भिडियो र फोटोहरू - हामी ल्याए सर्वश्रेष्ठ घटना फोटोग्राफर राज्य मा, पॉल D'Andrea। र हामीसँग इसहाक डानियल, एक थियो कुशल वीडियोग्राफर जो कथा कथनमा माहिर हुन्छ एक टोली, क्यामेरा र GoPros को संग्रह, र नन-स्टप उर्जाको साथ आउँछ। (भिडियोहरू डाउनलोड भइरहेको छ र म यस लेख्दा मिश्रित हुँदैछ)।
हामी के चुक्यौं?
जबकि यो एक महान घटना थियो, म विश्वास गर्दछु कि हामीले एक जोडी वस्तुहरू छुटायौं:
कार्यक्रममा - एक मिनी कार्यक्रम महत्वपूर्ण स्वागत मान्छे, महत्वपूर्ण लि ,्कहरू, प्रायोजकहरूको वर्णन, र उनीहरूको लागि एक समय प्रदान गर्ने थियो!
प्रायोजक भ्रमणहरू - मलाई लाग्छ एक बिंगो-शैली कार्ड, जहाँ FATWIN खेल्नको लागि मानिसहरू प्रत्येक प्रायोजकबाट टिकट लिनु पर्दछ प्रत्येक टेक्नोलोजी बुथमा बढी यातायात चलाउँदछ।
भर्खर एउटा नोट - मलाई यसका लागि मनोनयन गरिएको थियो मानिस र वुमन अफ द इयर अभियान र तपाईं अझै गर्न सक्नुहुन्छ १० मे सम्म दान गर्नुहोस्!
टैग: रक्सीचार्ज स्टेशनहरूदानdittoe पीआरपिउनघटनाकार्यक्रम व्यवस्थापनफेसबुक घटनातिहारचाड सूचीखानामाइक ओटिंगरसंगीतprसार्वजनिक सम्बन्धपिरामिड ध्वनी काम गर्दछसामाजिक विज्ञापनसामाजिक पदोन्नतीध्वनिस्टीभ gerardiटी-शर्टटी शर्टस्थान